‘मजदुरलाई गरि खान देऊ’ – sunpani.com
‘मजदुरलाई गरि खान देऊ’
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जको त्रिभुवनचोकमा विहान मजदुरको घुँइचो लाग्छ । मजदुर चाहिनेहरु त्रिभुवनचोक पुग्छन् र उनीहरुलाई कामका लागि लैजान्छन् ।
यो अहिले हुने गरेकोमात्रै गतिविधि होइन, वर्षौदेखि चलिरहेको छ । राज्यले कोरोनाको कहर भनिरहेपनि पेट पाल्नका लागि मजदुरहरु कामका लागि निस्किन बाध्य भएका छन् । स्थानीय निकायहरुले शुरुमा १०÷१५ किलो चामल बाँडेपछि चुप बसेका छन् । त्यसले विपन्नलाई पाँच महिना खान पुग्यो होला र ? यस विषयमा राज्यले सोचेको खोइ ?
कोरोनाको कहर बढ्दै जाने देखिन्छ । यस्तोमा मजदुरलाई सावधानी अपनाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । काम गर्न नदिने र राहत पनि नदिने प्रवृत्तिले विष्फोट हुन सक्छ । लामो समयसम्म बन्द हुँदा मध्यम वर्गलाई अप्ठेरो पारिसकेको अवस्थामा विपन्नको अवस्थाप्रति सरकारले ख्याल गरेको खोई ?
विहान त्रिभुवनचोकमा देखिने मजदुरले मास्क लगाएका छन् । एउटा सेनिटाइजर लिएर हिड्न र भौतिक दुरी कायम गर्न लगाउन सकिन्छ । कोरोनाबाट पनि सचेत गराउने र मजदुरलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । गरि खाने वर्गलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । त्रिभुवनचोकमा कतैबाट नौलो मान्छे आउदा मजदुरले उसको अनुहारमा हेरेर कति आशावादी हुन्छन् ? कोरोनाको त्रास देखाएर घरभित्रै बस्न आग्रह गर्ने अधिकारीहरुले बुझ्न जरुरी छ । अब भीडभाड भयो भन्ने हो भने उनीहरुलाई गएर सम्झाउन सकिन्छ ।